Kushone 5 wabasolwa abebedubulana namaphoyisa eThekwini | News24
Kushone 5 wabasolwa abebedubulana namaphoyisa eThekwini
Durban – Amaphoyisa aKwaZulu-Natal adubule abulala amadoda amahlanu asolwa ngokuphanga kulandela ukuncinzwa indlebe.
Okhulumela amaphoyisa uColonel Thembeka Mbhele uthe amaphoyisa ophiko lwezinja nolwe-Flying squad ngemuva kokulandela imininingwane ngabasolwa abangu-6 abahamba ngemoto yohlobo lwe-Mercedes Benz SUV emhklophe ePinetown.
Amaphoyisa azamile ukumisa imoto ngemuva kokuba itholakele kodwa abasolwa babe sebevulela ngenhlamvu bebhekise emaphoyiseni.
"Abasolwa bavulele ngenganono bebhekise emaphoyiseni namaphoyisa aziphindiselela. Umshayeli wemoto yabasolwa ube esehluleka ukulawula imoto, yayoshayisa yaqeda yanginqika ku-M13 highway," kusho uMbhele.
OLUNYE UDABA:Kudutshulwe abasolwa ebebedubulana namaphoyisa
"Kushone abasolwa abangu-5 abaneminyaka ephakathi kwengu-25 nengu-35 endaweni yeisgameko, owesithupha walimala kanzima."
UMbhele uthe amaphoyisa athole izibhamu ezintathu, omabonakude ababili, amakhamera amabili ne-laptop.
"Kusolwa ukuthi abasolwa babandakanyeka ezigamekweni zokuphanga ezingaphezu kwezimbili izolo (ngoMsombuluko)," kusho uMbhele.
Umsolwa olimalile uqashwe ngamaphoyisa esibhedlela kanti kulindeleke ukuba avele enkantolo yemantshi yasePinetown ngamacala okuzama ukubulala, ukutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni, ukutholakala nempahla eyebiwe nokubamba inkunzi uma eseluleme.